Imicimbi emithathu yase-Italiya ye-Bolster Tourism enesikhuthazo esisha sokuqiniseka
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba Zase-Italy » Imicimbi emithathu yase-Italiya ye-Bolster Tourism enesikhuthazo esisha sokuqiniseka
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba Zase-Italy • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-TTG, i-SIA ne-SUN 2021 zifinyelela esiphethweni esiyimpumelelo
Ekuphothulweni ngempumelelo kwe-TTG, i-SIA, ne-SUN 2021, kuyithemba likaNgqongqoshe Wezokuvakasha e-Italy, uMassimo Garavaglia ukuthi umgomo wokukhula kwezokuvakasha we-20% we-GDP yinto engafinyeleleka.
I-TTG, I-SIA ne-SUN 2021 zifike emaphethelweni eRimini Expo Center (e-Italy) izivakashi ezibhalisa u-90% wenombolo eqoshiwe kumagazini ka-2019. Ihlelwe yi-Italian Exhibition Group, le micimbi mithathu, ehlanganisa ukuqoqwa kokuphakanyiswa kwezokuvakasha, ibone ushintsho olucacile ekuzethembeni kwabaqhubi: indikimba ebalulekile lapho kuvulwe uhlelo lwalo nyaka. Ukuvakasha kwase-Italiya nakwamanye amazwe ngakho-ke kuqala kabusha kusuka lapha.
Imakethe yezokuvakasha yase-Italy ehlelwe yi-Italian Exhibition Group ithinte amazinga abakhona ngaphambi kobhadane.
Imikhiqizo eyi-1,800, iziqinisekiso, nokufakiwe okusha okuvela emazweni amaningi aphesheya nasezifundeni zase-Italy bekukhona.
Imicimbi engaphezu kwama-200 ezinkundleni ezinezihloko ezingama-9 zamahora wokuxoxisana nolwazi yayenzelwe ochwepheshe bemboni ngqo.
Ukuqala kabusha okwenze abathengi abangu-700 abavela emazweni angaphezu kwama-40 angaphandle (iningi labo abakhona ngokomzimba ngokufana okubonakalayo kwalabo abavela emazweni abebengadinga izindiza ezithatha isikhathi eside), ama-62% avela eYurophu kanye nama-38% avela emazweni angewona awaseYurophu. Ama-80% ama-opharetha akhethelwe ukufaniswa okukhethekile kwezokungcebeleka kwezokungcebeleka (kusuka ekuhambeni kweqembu kuya kuziphakamiso ezenziwe ngokukhethekile) ngokuhlanganyela okwengeziwe emkhakheni we-MICE (Imihlangano, Izikhuthazi, Izingqungquthela kanye Nemibukiso). Kusatshalaliswe amahholo angaphezu kwe-19, imikhiqizo eyi-1,800 ibikhona kanti imicimbi engaphezu kwama-200 ibibanjelwe izikhulumi ezingaphezu kwama-250 kuma- “Arenas” ayisishiyagalolunye ngamahora angama-650 okuxoxwa nolwazi.
Imiphumela eyeqe kahle kakhulu obekulindelwe futhi yasondela emazingeni obhadane lwandulela-ngubhubhane, yathola ukunconywa okubanzi kubo bonke ababambiqhaza ababekhona futhi babamba iqhaza ekwakheni umyalezo wesibindi nobuchule emkhakheni othinteke kakhulu emhlabeni wonke ngenxa yokwethuka kobhadane. Amazwe angaphandle angamashumi amathathu ahambela i-TTG, amanye awo i-Italy evule khona imigudu yezempilo, ahlinzeka ngophawu lokuzethemba ukuthi imakethe yezokuvakasha ehleliwe ibilindelwe. Izindawo ezishisayo, iMpumalanga Ephakathi, iMelika kanye nedolobha laseMedithera, kanye neYurophu, kuphefumule impilo entsha ngokufanisa amaphakheji amasha abavakashi bamazwe aphesheya.
Ngokubambisana nezinhlangano ezimele kakhulu, kusuka eFederalberghi kuya emikhakheni emelwe yiConfturismo, ASTOI (Tour Operator Association), FTO (Organised Tourism Federation), kubandakanya i-FAITA Federcamping, SIB (Seaside Establishment Union), umlingani wesikhungo i-ENIT (Italian Tourism Board) , izifunda, umhlaba wezocwaningo ne-ISNART, iMilan Polytechnic ne-CNR (National Research Council) kanye nabahlaziyi bezimakethe nabathengi, kukhalelwe ikhalenda lemihlangano elizomela ezokuvakasha ezizayo.
Uhlobo lwezokuvakasha oluzoxoxisana nezikhungo ukuze zihlomise ngokushesha ngamathuluzi adingekayo ekuqaleni okusha: kusukela kuziphakamiso ezibekiwe zokuthuthukisa umkhakha wokungenisa izihambi ngokwengqalasizinda kanye nomqondo ukuze kuhlangatshezwane nesidingo esanda njalo sekhwalithi, kumasu amasha ezimboni, njengasesimweni se-ITA (i-Italian Air Transport), esiqinisekise ukuzibophezela kwayo ekusimameni kwemvelo nakwezomnotho ngokusebenza ngamabhanoyi akamuva kanye nokuhlangabezana nezidingo zezindiza eziqondile emizileni yamazwekazi.
I-TTG iphinde yafakazela ukuthi izindawo zingakhula ngokukhethekile ngokulalela ubizo lwabo futhi zithuthukise izimpahla zabo zendabuko ezingaphatheki nemikhiqizo ehlukile, kusuka kwezokuvakasha ezinokuhlangenwe nakho kuya emizileni yewayini. Izitayela zemakethe zidinga ukukhonjwa kusengaphambili ngokubona kude ukuze kuvuselelwe amandla okuncintisana kwezokuvakasha e-Italy ezimakethe zomhlaba. Okuvelele kwe-58th TTG kukhulume ulimi lokuzethemba kubantu, empilweni, kwimvelo nakusasa. Ngesikhathi somcimbi wokuvula, uNgqongqoshe Wezokuvakasha uMassimo Garavaglia uzwakalise ithemba lokuthi inani lezokuvakasha lizokhula ngo-20% we-GDP ngenxa yomphumela ohlangene womkhiqizo wase-Italy kanye nezinyathelo ezamukelwa nguHulumeni ngokuxhasa amabhizinisi nomsebenzi.
Ukumaka iminyaka engu-70 yokwakhiwa kwezihambi ze-SIA, imibukiso emine - Amagumbi, i-Outdoor, i-Wellness ne-Hotel e-Motion - elawulwa ngabadwebi abasebenza ngokukhethekile ekungeniseni izihambi nokwakhiwa kwezinkontileka, iveze ukuqamba nokuziphendukela kwemvelo emahhotela akwa-Made in Italy phakathi kokunethezeka okuncane, ukusimama nokunakwa okukhulu enhlalakahleni yomzimba nengqondo yezivakashi, ngokunaka okwandayo ebhalansi phakathi kwezikhala ezivaliwe nezivulekile.
ISUN Beach & Outdoor Style, kushicilelo lwayo lwama-39, ibiphinde ibe nohlelo olunemibono emisha yamabhizinisi angaphandle, izindawo zokugeza kanye nezindawo zokukhempa. Imiqondo emisha yokukhanyisa ibumbene nesidingo sokwakhiwa, ukunakwa kwemininingwane nomoya ovulekile wemakethe engaba namandla kakhulu e-Italy nakwamanye amazwe, kubandakanya namazwe abandayo asenyakatho neYurophu. Futhi ILANGA liphinde lahlinzeka ngamathuluzi ezinkampani ukuthi zigxile kulesi sigaba, ngezimpikiswano ezihlosiwe ohlelweni lwe-Outdoor Arena nokugxilwe ngqo kuzindikimba ezahlukahlukene eBeach Arena kubuchwepheshe obusha bedijithali amabhishi manje adinga ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezintsha kumakhasimende egameni yokuphumula nokuphepha.
Ngaphezu kwalokho, kulo nyaka amahholo e-SIA abuye abe nomcimbi omusha weSuperfaces, indawo emakethe ye-b2b ngokukhethekile ngezinto zokwakha zangaphakathi, ukuklama nokwakhiwa kwezakhiwo.
I-IEG ilangazelele ukuhlangana nayo yonke imboni yezokuvakasha yase-Italiya nakwamanye amazwe eRimini Expo Center kusuka ngo-Okthoba 12-14, 2022.
Iwayini lixhumanisa iCatenas neRothschilds: Faka okusha ...
IGreat Britain isilungele ukuchuma kwezokuvakasha ngo-2022
I-IceCure Medical ingene ekusatshalalisweni kokuqala ...
IATA: Ukuvulwa kabusha kwe-US kubahambi abagonyiwe ngu ...
I-Jamaica Blitz Ezimakethe Zomhlaba: Isibuyekezo Esisemthethweni sika...
Imoto Entsha Ye-Premium Sport Compact
I-Severin Hotel: Intandokazi Yabagibeli ku-300 Nsuku Zonke...
I-lira yaseTurkey iphahlazeka iye phansi ngaso sonke isikhathi ngokumelene ne-US ...
Indiza entsha phakathi kweToronto Island ne-Ottawa On Air ...
I-Key West ikhansela i-2021 Fantasy Fest Parade
Abagibeli Abafika E-Uganda Manje Sebakhululekile Ukuqhubeka Ngemva...
I-Tokyo iphakamisa imikhawulo yezindawo zokudlela njenge-COVID-19 entsha ...
Imizamo Yokubuyiswa Kwezokuvakasha Ithola Umfutho Omkhulu Ekubuyeni Kwe...
I-Germany isetha irekhodi elisha le-Electric Vehicles
UBrandt udala umthengisi wezinto zomhlaba wonke ...
IPrincess Cruises i-Emerald Princess ibuyela enkonzweni ...
I-IHG, u-Hilton no-Marriott bathembele ku-Benchmark Pyramid...
Izinsuku Ezintsha ze-ITB Berlin: Mashi 9-13 bukhoma futhi mathupha
Ingabe abavakashi baseShayina bayabuya? Umbiko wamaphoyinti angukhiye...